T-SHIRTS forever.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » T-SHIRTS forever..
Posted by zoe on Jul 18, 2011 in Society & Lifestyle, Style & Beauty | 14 comments
fashion T-shirt zoe
အခု ခေတ်စား နေတဲ့ ထိုင်ဝမ် မိတ် ဂျပန် ကိုရီးယား ဒီစိုင်း T-SHIRT်တွေပါ ။ ဝတ်နေကျ polo t-shirt ကနေအပြောင်းအလဲ လေးပေါ့ ။ ဈေးနှုန်း ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၂၄၉ မှ ၃၅၀ ပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပါတယ် ။ on-line ကလည်း ခရက်ဒစ်ကတ် လပေးအတိုးမရှိ စံနစ်နဲ့လည်းဝယ်လို့ရ တယ် ။ on-line ကတော့ ထိုင်ဝမ် အတွင်းပဲ မှာလို့ရပါတယ် ။
ထသွား ထလာ ၊ ဈေးသွား၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ အလုပ်သွား ၊ ဝတ်ရအဆင်ပြေတဲ့ T-SHIRT တွေပါ ။ ပူအိုက်တဲ့ရာသီ နဲ့ ဟာအလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး ချည်သားဖြစ်လို့ဝတ်ရတာနူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့ရှိ တယ် ။ ချွေးလဲစုပ်တယ် ။ အခု ခါးရှည်အင်္ကျီ ပြန်ခေတ်စားနေတော့ ဘောင်းဘီချက်ပြုတ်နဲ့ တွဲဖက်လဲလုံခြုံပါတယ် ။ အရောင်အနေနဲ့က အဖြူ မဟုတ်ရင် အရောင်တောက်တောက် ခေတ်စားတယ် ။
T-shirt နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ jeans ဘောင်းဘီပါပဲ ။ မှိုတက် ဒီဇိုင်း ၊ stone-washed နဲ ripped jeans ပုံ(၆)့  ၊ အခုခေတ်စားတယ် ။ဲ့ကိုယ်လုံးသေးသွယ်သူများအတွက် ကskinny typed ပုံ (၁) ဟစ်ဖြစ် တယ်။
ပထမပုံ လို လှည်းဘီးမျက်မှန် ကမျက်နှာတဝက်လောက်ကို ဖုံးထားလို့ နေရောင်ခြည် ကလဲကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွား တာပေါ့ ။ မျက်မှန်ကို မလိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ ယာရီ နောက်ဖက်ပင့်တင်ပြီး ခေါင်းပေါ်ချိတ်တင်ထားတဲ့ style လဲထုတ်လို့ရတယ် ။လိုက်ဖက်တဲ့ အိတ်နဲ့ဖိနပ် နဲ့ထပ် ဆောင်းလိုက်ရင် ပိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့ ။
အိတ်အနေနဲ့က မော်ဒယ်တွေလွယ်ထား တဲ့လူတယောက်လုံးထည့်ထားနိုင်တဲ့ အိတ်မျိုးနဲ့ ဖိနတ်က ပုံ(၃)၊ ပုံ(၅) လို ရောမခေတ် ဒီဇိုင်းခေတ်စားတယ် ။
ရွာသူ အားလုံး လှပ ခေတ်မှီ စေဖို့ idea လေးတွေပါ ။
ချစ်တော့ ချစ်စရာလေးတွေပါပဲ .. ။ အထည်အသားကိုင်မကြည့်ရသေးပဲ … ဘယ်လိုမှ ၀ယ်ယူဖို့ စဉ်းစားလို့မရ ….
ဟုတ်ပါ့ အီးတုံးရေ။ အသားကို (ရှလွတ် ရှလွတ်) အရင်ကိုင်ကြည့်မှ ဖြစ်မှာပေါ့။
အဝတ်အစား၊ ဘောင်းဘီ၊ ဖိနပ်ဝယ် ရင် on-line ဝယ်လေ့မရှိ ဖူး ။ ဆိုင်မှာ fitting လုပ်ပြီးမှဝယ်လေ့ရှိ တယ် ။ အသား ကောင်းလေ ဈေးကောင်းလေ ပဲ ။ တချို့ကျအသားကောင်းပြီး ပုံရိုးတယ် ။ Ed Hardy လို designer-tee ကျတော့ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ တစ်ထောင်ကျော် ကနေ ငါးထောင်ကျော် ဈေးရှိတယ် ။
အကျီ င်္ တွေ ထက် ဘောင်ဘီတွေ ကို ပိုကြိုက်တယ်….
လုပ်ငန်းရှင်များ မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာတော့မယ်ဆိုရင် ချောချောလှလှမော်ဒယ်သုံးတိုင်း မကောင်းဘူးလို့
ဘာကုန်ပစ္စည်းမှန်း မသိလိုက်တဲ့လူတွေ များမယ်
နောက်ဆုံးတော့ မော်ဒယ်ပဲ နာမည်ကြီးသွားတယ်
ဒီပစ္စည်း ကိုသုံးရင်ကိုယ်လဲ ဒီမော်ဒယ် လိုပုံထွက် ပြီးလှလာမယ် မဟုတ်ဖူးလား ။ မှတ်မိ တာ mobile phone ပေါ်ခါစ က အင်မတန်ရုပ်ဖြောင့် ပြီး ယောက်ျား ပီသတဲ့ ဂျပန်မော်ဒယ် နဲ့ကြော်ငြာ တာ အမျိုးသား အများ က အဲဒီ ကြော်ငြာ တဲ့ကုမ္ဘဏ် က mobile phoneတွေကို အဝယ်များ တယ် လို့ဖတ်ဖူးတယ် ။
အင်္ကျီ လှမလှတော. မသိဘူး မော်ဒယ်လေးတွေကတော. အဟမ်းးးးးးးးးးးးးးးး
အင်္ကျီရော ဘောင်းဘီရော ကြိုက်တယ် ဒါပေမယ့် ပုံစံလေးလှပြီး
အသားက မကောင်းရင် ဒါမှမဟုတ် ဒီကရာသီဥတုနဲ့ မကိုက်မှာပဲဆိုးတယ်
ချည်သား လေ ပူအိုက်တဲ့ရာသီနဲ့ ကိုက်ပါတယ် ။
ယောက်ျားလေး အမြင်နဲ့ ကြည့်မိလို့ လား မသိဘူး ။ မော်ဒယ် လေး တွေ က ပို လန်းတယ် ဗျာ ။
ဒီပို.စ်တင်တဲ့သူကို ကြိုပြောထားမယ်နော်… ရွာသားတွေရဲ.ကောင်မလေးတွေ တွေ.သွားရင် ပိုက်ပိုက်ကုန်မှာတော့ သေချာတယ်..
အဲဒီတော့ ပို.စ်တင်တဲ့သူ က ကုန်ကျငွေတ၀က်စိုက် ဟေ့ဟေ့